Barber Chop Apk Dhawunirodha Ye Android [Game] - Luso Gamer
Saka iwe une caliber uye wakagadzirira kukunda hunyanzvi hwekugadzira mukucheka bvudzi zvisina tsarukano. Wobva wadhawunirodha zvirinani uye woisa yazvino vhezheni yeBarber Chop Apk. Iyo gameplay ndeyemahara kurodha uye haidi kunyoreswa kweprimiyamu kuti iwanikwe.
Kunze uko akawanda emamwe maapplication erunako anosvikika. Nekudaro, mazhinji emapuratifomu epamhepo anosvikika ari ekutanga uye anogona kukumbira kunyoreswa. Pasina kutenga kunyoreswa, hazvibviri kuwana izvo.
Asi nhasi pano taunza online mahara 3D Gameplay, izvo zvinoita kuti vatambi varatidze hunyanzvi hwekutamba. Zvese zvavanoda kuita kuisa mutambo uye kuratidza hunyanzvi hwavo hwekugera bvudzi. Kana iwe uchida mutambo wobva warodha BarBer Chop Game kubva pano.
Chii chinonzi Barber Chop Apk
Barber Chop Apk mutambo wepamhepo uye usiri pamhepo wakagadzirwa naLajeune & Associates, LLC. Chinangwa chekugadzirisa mutambo ndechekupa nzvimbo yakachengeteka. Iko vatambi vanogona kupfuudza hunyanzvi hwavo hwekucheka nekubvisa bvudzi rakashongedzwa.
Iwo Android gamers anotopupurira akawanda gameplays online. Izvo zvakanaka pakutamba uye zvinoenderana neyese madivayiri edhijitari. Asi kuwana iyo huru dashboard inoda kunyoreswa kweprimiyamu. Pasina kutenga pro rezinesi hazvibviri kuwana iyo mitambo.
Mitambo yerunako yepamhepo inosanganisira Makeup, Kupfeka, Kutaridzika, Mafashoni nezvimwe. Nhasi mutambo watiri kuratidza pano une chekuita neKugera Bvudzi. Kunyangwe ruzhinji rwevanhu vanogara vachishamisika kugera bvudzi uye kuita chimiro chakasiyana.
Asi kana uchishanyira vanogera chaivo saka vanogona kutadza kuwana dhizaini yavanoshuvira. Nekuda kwebvudzi risingagutsikane, vashanyi vazhinji vanoodzwa mwoyo. Kana iwe uchitenda kuti une hunyanzvi hwakanaka maererano nekugerwa kwebvudzi saka iwe zviri nani kurodha Barber Chop Android.
Package Zita com.lajeuneandassociatesllc.barberchopdev
chikamu Games - runako
Iko kurodha uye kuisa application kuri nyore. Ingo dhawunirodha yazvino vhezheni yeApk kubva pano. Wobva watanga maitiro ekuisa uye uwane yakananga yemahara yemahara kune main dashboard. Mukati meiyo huru dashboard, akawanda akasiyana zvikamu anowedzerwa.
Izvi zvinosanganisira Kucheka Zvishandiso, Anime Character, Bvudzi Zvitaera uye Screenshot sarudzo. Kusvika panguva ino, 16 anime mavara aripo kuti asarudze. Pakati pavo vatanhatu vanhukadzi, 6 Varume Vakuru, 9 Santa Claus uye 2 Teenager.
Kunyangwe vagadziri vari kuronga kuwedzera mamwe akawanda maficha. Kusanganisira iwo anime mavara uye ataurwa mavara anogona kusvikika kusarudza mumazuva anouya. Iyo gameplay inopa 3D kuratidza iyo inobvumira vatambi kuti vanakirwe nekufamba hunhu mumativi ese.
Yakanyanya kuwedzera iyo inoita kuti mutambo wacho uwedzere kunakidza inbuilt kamera icon. Ikozvino kusarudza iyo chaiyo pikicha icon inobvumira vatambi kuti vatore akasiyana selfies. Kana wapedza kutora selfie wobva waipinza mukati meapp.
Iye zvino ipa kugerwa kwakasiyana kune vhudzi rako. Rangarira iyi ficha ndeye mahara kuwana uye inoda account. Izvi zvinoreva kuti kuwana sarudzo inoda kunyoreswa. Kuona kushambadza kuchabatsira mukuvhura pro yekucheka zvinhu. Saka semutambo wobva waisa Barber Chop Dhawunirodha mukati me smartphone.
Iyo yekutamba app yakasununguka kuwana.
Kubatanidza mutambo kunopa yakasarudzika yekucheka 3D kuratidza.
Apo vatori vechikamu vanogona kubudirira mukugera.
Zvinhu zvakasiyana-siyana zvekubvisa bvudzi zvinowanikwa kusarudza.
Madhizaini akawanda anowedzerwa mukati megalari.
Iyo yakadzama zooming sarudzo inobatsira mukubvisa bvudzi zvakadzama.
Clip Guard inosvikika kudzikisa kukora kwebvudzi.
Kuti uwane selfie based haircut ndapota nyoresa kutanga.
Kuona kushambadza kuchabatsira mukuvhura pro yekucheka zvinhu.
Maitiro ekurodha Barber Chop Apk
Panzvimbo yekusvetuka yakananga kugadziro uye kushandiswa kwekushandisa. Nhanho yekutanga kurodha uye kune iyo vashandisi veandroid vanogona kuvimba newebhusaiti yedu. Nekuti pano pawebhusaiti yedu, isu tinongopa echokwadi uye epakutanga maApk mafaera.
Kuti tive nechokwadi chekuchengetedzeka uye kuvanzika kwevatambi, takahaya timu yenyanzvi inoumbwa nenyanzvi dzakasiyana. Kunze kwekunge timu ine chokwadi chekushanda zvakanaka kweApk. Isu hatimbope iyo yemitambo app mukati mekurodha chikamu.
Iyo yekutamba application yatiri kupa pano ndeye yepakutanga uye inotsigirwa nePlay Store. Isu takatoisa mutambo pamusoro peakasiyana android smartphones uye hatina kuwana nyaya hombe. Saka vatambi vanogona kunakidzwa nekutamba pasina kunetsekana.
Akasiyana Android emitambo maapplication anoburitswa pano pawebhusaiti yedu. Izvo zvakanaka pakutamba uye zvinopa ese ari maviri online uye offline mode mitambo. Kana uchifarira kutamba mitambo iyoyo tevera zvinongedzo. Ndivo Yangu Town World Apk uye FNAF Batsira Inoda Apk.
Kana uri kutamba hunyanzvi hwakajeka maererano nekugerwa kwebvudzi. Zvino uyu ndiwo mukana wako wakanakisa wekutonga hunyanzvi hwekucheka kuisa Barber Chop Apk. Izvo zvinosvikika kurodha kubva pano nekudzvanya imwe sarudzo yemahara.
Categories runako, Games Tags 3D Mutambo, Barber Chop Android, Barber Chop Apk, Barber Chop Download, Barber Chop Game Post navigation